Apple TV + waxay lawareegtay xuquuqda filimka Musiibada Musiibada ee Denzel Washington | Waxaan ka socdaa mac
Apple TV + ayaa la wareegtay xuquuqda tan xigta Dhibaatada Macbeth, Filimkii ugu horreeyay ee uu qoro oo uu maamulo Joel Coen la'aantii walaalkiis iyo filim wadaage Ethan Coen. Filimka Waxaa markii ugu horreysay laga daawan doonaa tiyaatarada adduunka oo dhan inta lagu jiro rubuca afaraad ee 2021, ka hor inta aan adduunka laga saarin Apple TV +.
Sida laga soo xigtay Deadline, filimka waxaa loo tixgeliyaa mashruuc sharaf leh iyo a Abaalmarinta xilli ciyaareedka abaalmarinta. Waxaa jilaya Frances McDormand iyo Denzel Washington, oo ku guuleystey dhowr Oscar, Coen laftiisuna wuxuu leeyahay afar Abaalmarin oo Akadeemiyadeed. Liiska noocan oo kale ah, waxyaabo aad u yar ayaa khaldami kara.
McDormand wuxuu matalaa Lady Macbeth, Washington-na wuxuu u ciyaaraa Lord Macbeth, oo ah qaab qaab muuqaal ah u sameeyay ruwaayadii William Shakespeare. Filimka waxaa lagu duubay madow iyo caddaan. Coen ayaa waliba doortay iska ilaali duubista banaanka, isagoo doorbidaya waxa uu ugu yeeray "wax aan jirin" ee muuqaalada.
Qeybaha kale ee ugu weyn waxay ka kooban yihiin Bertie Carvel, Alex Hassell, Corey Hawkins, Kathryn Hunter, Harry Melling iyo Brendan Gleeson. Sawir qaade, Bruno Delbonnel, nashqadeeyayaasha dharka, Mary Zophres, iyo curiyaha, Carter Burwell, waa aqoon hore ee Coen.
Heshiiskani wuxuu noqonayaa cinwaan xiiso leh xilli ciyaareedka soo socda oo filimku ku jiro CODA, waxaa Director ka ahaa Sian Heder, oo guuleystay 4 abaalmarinno ah xafladda Sundance, oo ay ku jiraan Abaalmarinta Dhageysiga iyo Abaalmarinta Grand Jury.
Ku socota CODA, waa inaan ku darnaa Finch, waxaa jilaya Tom Hanks, Filim sheeko khayaal ah oo ka socda Amblin Entertainment oo uu hogaaminayo Miguel Sapochnik, filimka ayaa la filayaa inuu ka soo muuqdo Apple TV + dabayaaqada sanadkan.
sidaas darteed CODA sida Finch iyo musiibadii Macbeth waa 3 sharad xiiso Apple si aad ugu qalanto Abaalmarinta Akadeemiyadda.
Wadada buuxda ee maqaalka: Waxaan ka socdaa mac » Apple » Noticias » Apple TV + waxay xaqiijineysaa xuquuqda filimka masiibada musiibada ee Denzel Washington
Dhibcaha ugu horreeya ee Geekbench ee 24-inji cusub ee iMac ayaa soo muuqda